चिनले कोरोना खोप बनाएसङ्गै, आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य ! – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > चिनले कोरोना खोप बनाएसङ्गै, आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य !
admin August 28, 2020 बिजनेस, समाचार	0
काठमाडौं । चिनले कोरोना खोप बनाएसङ्गै, आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य ! सुनको मूल्य आज ७ सय रुपैयाँले घटेको छ । साताको अन्तिम दिन नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ७ सय रुपैयाँले घटेर र ९६ हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नोपल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुन ९६ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसअघि बिहीबार छापावाल सुन तोलामा ९७ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै शुक्रबार चाँदी तोलामा पाँच रुपैयाँले घटेर १३ सय ४० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
*** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
रित्तै हात फर्किंदा पनि खुशी छन् कामदार: भन्छन्, ‘सरकारले सहयोग गरे अब विदेश जाँदैनौं ।’